Ekpere Santa Muerte ka o chee maka m. ? 24 awa
Ekpere bu Mmuo Nso diri ichem bụ inye ikike Saint a ịbanye na mmekọrịta anyị inye anyị enyemaka dị anyị mkpa.
Okwesiri iburu n’uche na nke a bu ekpere nke a na-adighi eme n’oge nke ndi anyi na ha na emebu kama o nwere ike ime n’oge niile ka onye a mee ka anyi tinye n’uche oge niile.
Ọ bụ ekpere dị ike anyị ga-eji nwayọ mee n'ihi na nsonaazụ ya bụ ihe ịtụnanya, enwere ike ịchọpụta site na mgbe anyị kwụsịrị ikpe ekpere.
1 Ekpere bu Mmuo Nso diri ichem
1.1 Kedu mgbe m nwere ike ikpe ekpere nke ọnwụ nsọ iji chee banyere m?
1.2 Ekpere na-arụ ọrụ ọsọsọ?
1.3 Gịnị ka ekpere a bụ maka ya?
Ike agwụla m, enweghị isi, enweghị obi ike na enweghị ịhụnanya.
Ọ dị m ka m fuo, mana m ka nwere ike ịchọta onwe m. Ka m na-etiku gị, a na-agbake okwukwe m.
Abịara m gị n’ihi na m chọrọ ime ka m ghara ịbụkwa. Ejewo m ije n'okporo ụzọ gbara ọchịchịrị, hụrụ ihe ga-ekpe chi m ihu.
Oge ndị mere ka m daa ma ọ bụ ezie etolitere m, taa a nọ m n’ala n’enweghị ike ịkwụsị.
Ọnwụ gọziri agọzi, meere m ebere tụgharịa nyere m aka.
Ọnwụ a gọziri agọzi kpọghachitere m ọnọdụ nke ndụ, mezue nke a bụ ọkara.
Gọzie m, gbujie agbụ ma kee m nku nku mere m ji fepụ.
Naanị m tụkwasịrị gị obi, naanị gị ka m na-ekpe ekpere, naanị m chọrọ ka ị gbakee.
Laghachinụ n'okporo ụzọ nke ndụ, ebe anya m hụrụ ìhè.
Ebe ntịm gere egwu na anụ ahụ m na-anụ emetụ ikuku na-esonyere m.
Nyeghachi m azụ, kpọghachite m na achọghị m ịga tere aka. Achọrọ m ịdịghachi ndụ.
Ama m na ị na-ege m ntị, m na-arịọ gị, gbanwee ndụ m, ekwere m nkwa (kwe nkwa) dịka ekele a.
Nke a bụ a Ekpere na esite n'obi Ọtụtụ mgbe, otu n'ime ndị na-eme mmekọrịta ahụ nwere ike iche na ọ bụ ezughi oke ...
Ihe ahụ agaghị aga dị ka ha kwesiri ma ọ bụ na enwere ụfọdụ mmanụ ọkụ ọ dị ebe ahụ ekpere Ọ bụrụ ngwa agha kachasị ike anyị nwere.
Kedu mgbe m nwere ike ikpe ekpere nke ọnwụ nsọ iji chee banyere m?
You chọrọ ịma mgbe ị nwere ike ikpe ekpere?
Mgbe obula anyi choro mkpa Anyị nwere ike kpee ekpere na ntụkwasị obi na ntụkwasị obi.
N'agbanyeghị ebe anyị nọ, ọ na-achọ okwukwe na site na mkpụrụ obi.
Ọ baghị uru ụbọchị ma ọ bụ oge ahụ. Ihe dị mkpa bụ inwe okwukwe.
Ekpere na-arụ ọrụ ọsọsọ?
Ekpere ndị ahụ n’onwe ha enweghị oge a kapịrị ọnụ ọ ga-aza ma n’oge a, e nwere ọtụtụ puku ndị kwere ekwe na-agba mbọ hụ na a na-aza ekpere ndị na-ebilite Ọnwụ Nsọ n’oge obere.
Nke a nwere ike ịdabere n'ọtụtụ ihe dịka okwukwe ma ọ bụ ogo nke mkpa a na-agafe, agbanyeghị na o siri ike iji hụ ihe dị otu a, yabụ anyị ga-ekwenye na a na-aza omume n'oge oge zuru oke, ọ bụghị tupu ma ọ bụ mgbe ọ gachara.
Ekpere ichebara m echiche bara uru nọrọ na echiche onye ozo.
Enwere ike iji ya mee ihe n'ọnọdụ niile nwere ike ibilite na ọbụna mmekọrịta nke na-enweghị ihe jikọrọ ya na ịhụnanya.
Ọ bụ ekpere dị ike ka a ga-eji ibu ọrụ mee ya n'ihi na ọ ga-enwerịrị ebumnuche ma ọ bụ ihe mgbaru ọsọ iji rụzuo ebe ọ bụ na anyị ekwesịghị ịnabata echiche onye ọzọ ma ọ bụrụ na anyị ebughị ụzọ kpebie ihe anyị ga-eme ebe ọ bụ na ọ ga-arụ ọrụ n'ezie.
Ọ na - etolite n’ike niile nke ikpegara Ọnwụ Ọnwụ echiche nke m.
EKPERE EKPERE MAKA MADIRI EGO iji laghachigharia onye anyi huru n'anya
Ekpere ọnwụ dị nsọ maka ịhụnanya na - agaghị ekwe omume